होसियार ! क’ ण्ड ‘मको प्रयोगमा भुलेर पनी नहुन यस्ता ५ गल्ती ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
होसियार ! क’ ण्ड ‘मको प्रयोगमा भुलेर पनी नहुन यस्ता ५ गल्ती !
यौ’न रोगको ख’तराबाट बच्न होस् वा अनिच्छित ग’र्भबाट बच्नका लागि सबैभन्दा भरपर्दो माध्याम हो, क’न्डम । त्यही अनुसार क’न्डमको प्रयोग पनि व्यापक रुपमा हुन्छ ।
तर, क’न्डम कसरी लगाउने ? यसको सही विधी के हो ? क’न्डमको प्रयोगमा हुनसक्ने ग’ल्तीहरु के हुन् ? यसबारे खासै चासो राखिदैन । त्यसैले क’न्डमको प्रयोग त गरिन्छ तर, त्यसबाट अपेक्षा गरेजस्तै सुरक्षा भने भइरहेको हुँदैन ।
त्यसैले क’न्डमको प्रयोग गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
क’ण्डम चेक नगर्नु
जहिले पनि क’ण्डम प्रयोग गर्नु अगाडि चेक गर्नु पर्छ । कहिलेकाहि क’ण्डम प्रयोग गर्नु अगाडि नै च्या’तिएको अथवा प्वाल परेको हुन्छ । यदि त्यस्तो छ भने त्यो क’ण्डमलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यसैले अगाडी नै सचेत हुनुपर्छ ।
क’ण्डमको प्याक खोल्दा
क’ण्डमको प्याकेट खोल्दा पनि निकै होसि’यार हुनुपर्छ । दाँत अथवा नङले खोल्नु हुन्छ भने त्यो सही होइन । दाँत अथवा नङले क’ण्डमको प्याकेट खोल्ने क्रममा क’ण्डम च्या’तिन सक्छ ।
क’ण्डमलाई दोस्रो पटक प्रयोग
यस्तो गल्ती पनि प्रायः धेरै पुरुषहरुले गर्छन् । उनीहरुलाई त्यसलाई पुनः दोस्रो पटक पनि प्रयोग गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने धारणा हुन सक्छ । तर यस्तो ग’ल्ति गर्नु हुँदैन । यस्तो ग’ल्तीले तपाईंहरु दुबैलाई इ’न्फेक्शन हुन सक्छ अथवा क’ण्डम च्या’तियो भने ग’र्भधारण पनि हुन सक्छ ।
क’ण्डम किन्नु भयो तर त्यसको मिति परिक्षण जाँच नगरी प्रयोग गर्नु भयो । तर त्यसको समय सकिएका कारणले त्यसले तपाईंलाई आवश्यक सुरक्षा नदिन सक्छ ।